“Barcelona waa kooxda ugu kubad heysashada fiican aduunka, laakiin Inter waxay ahayd geesi” – Spalletti – Gool FM
“Barcelona waa kooxda ugu kubad heysashada fiican aduunka, laakiin Inter waxay ahayd geesi” – Spalletti
(Inter) 07 Nof 2018. Macalinka kooxda Inter Milan Luciano Spalletti ayaa sheegay in Nerazzurri ay ahayd geesi kulankii ay xalay kula ciyaareen Barcelona tartanka Champions League.
Dhinaca kale Luciano Spalletti ayaa tilmaamay in Barcelona ay wali tahay kooxda ugu kubad heysashada fiican aduunka.
Barcelona ayaa xaqiiqsatay inay u soo gudubtay wareega 16-ka Champions League kaddib bar barihii 1-1 ay xalay San Siro kula soo gashay kooxda reer Talyaani ee Inter Milan.
Luciano Spalletti ayaa kulanka kadib u sheegay shabakada “Sky Sports” ee dalka Talyaaniga: “Waxay xaalada ku bilaabatay sida in ciyaarta ay ku soo idlaaneyso barbaro, kadib wuxuu gool lama filaan ah uu ka yimid Mauro Icardi, ciyaartoyda waxay u fal celiyeen si fiican”.
“Inter waxa ay barbareeysay Barcelona, kadib goolkii uu dhaliyay Icardi, intaas kadib kooxda waxay dooneesay inay dhaliso goolka labaad si ay kaga faa’ideystaan daqiiqadaha kulanka ka harsanaa”.
“Barcelona waxay aad ugu fiican tahay kubad isku dhiib dhiibka, waxay ay u muuqataa mid fiican marka aad ka daawaneyso kursiga keygda, marka aad isku daydo inaad cadaadis saarto Barcelona, ciyaartoyda waxay heli doonaan fursad, waxaana muhiim ah in laga faa’ideysto”.
“Barcelona waxay ku dhaweyd inay dhaliso goolkii labaad iyo kii seddexaad, laakiin Inter waxay ahayd geesi, sidaasi darteed waan ku faraxsanahay barbaraha iyo qaab ciyaareedka guud”.
Kadib goolkii uu ka dhaliyay kooxda Inter Milan, Malcom oo ka hadlay riyadiisa kaga aadan Barcelona